Ben Gurion nwere amụma benchmark - Holger Nilsson | Flammor - profetisk tidskrift
Ben Gurion nwere amụma benchmark - Holger Nilsson
Bipụtara August 2003
Israel mbụ Prime Minister Ben Gurion bụ nwoke ọhụụ. Ya ọhụụ nke a ejikere ịlọ ụwa mba, Israel, bụ a-akwọ ụgbọala odudu ná ndụ ya. Dị ka a benchmark maka otú nke a mba a ga-gbanwee site a desert mba n'ime mba bara ọgaranya, o nwere Akwụkwọ Nsọ amụma. Ndị amụma kwuru nke a na Ben Gurion huru ya. Ọ dịrị ndụ na nke a n'uche, dere, sị Akwụkwọ Nsọ ma na ha na tebụl ya.
Anyị onwe anyị hụrụ nke a na kibbutz, Sde ututu, ebe ọ bụ na agadi biri. On tebụl ya bụ Akwụkwọ Nsọ ka na-e. Anyị na-ahụ ya oche na image na-abụghị. Ebe a na-ndeputa nke o dere: Jer.2: 2, Aịza. 35: 1, 43:19, 43: 19-20, 51: 3.Slå ha mma, na-agụ ha na-akụkụ na ọhụụ amụma nke na-enwogha n'ọzara - ihe anyị na oge anyị hụrụ mmezu nke.
Pịa ebe a na-ebipụta